FlightGear ụgbọ elu simulator bụ na-emeghe-isi, freeware simulator mepụtara site na FlightGear Project. The mbụ tọhapụ nọ na 1997, na otú anya, e nwere ọtụtụ releases.
N'agbanyeghị na freeware, FGFS bụ a dị ezigbo mma na ezi uche simulator. Tinyere simulator ya onwe, ihe ọ bụla ọzọ metụtara ọ bụkwa free download, iji na ịzụlite n'ihu. Ka ibudata ma ọ bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya, ị pụrụ ime ya na ukara FlightGear web site, www.flightgear.org .
Isi ebe ibudata dị iche iche ugbo elu, ihe karịrị 400 n'ime ha, bụ ebe a: github.com/FGMEMBERS .
Ezi ihe dị na ya bụ na ị na-adịghị ka aha ibudata ugbo elu na ị chọrọ.
Mma nwere ike ibudata na ụzọ abụọ, na weebụ saịtị ma ọ bụ site na iji TerraSync usoro n'ime simulator. Ọzọkwa, dabere na gị PC ike, ị nwere ike họrọ n'etiti ndabere na HD mma.
FlightGear na-nwere ya onwe ọtụtụ netwọk, ma dị mwute ikwu dịghị arụsi ọrụ ike kwalite asụsụ ọma na ụgbọ elu, ma ọ dighi nkwado maka nnukwu mp netwọk dị VATSIM ma ọ bụ IVAO.
Oge ike page: 0.114 sekọnd